Basikety – Mada 2018 : Tsara toerana ny GNBC sy ny Ascut -
AccueilSongandinaBasikety – Mada 2018 : Tsara toerana ny GNBC sy ny Ascut
Basikety – Mada 2018 : Tsara toerana ny GNBC sy ny Ascut
Hiditra amin’ny fihodinana faharoa ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy sy vehivavy. Hetsika karakarain’ny federasiona malagasy etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny 19 – 28 oktobra izao. Amin’ity indray mitoraka ity, ekipa 14 no hiady ny lohany eo amin’ny lehilahy raha 12 kosa ny eo amin’ny vehivavy.
Araka izany, taorian’ny fihodinana voalohany, izay notanterahina tany Mahajanga, ny volana avrily lasa teo, tsara toerana ary mitana ny lohany vonjimaika eo amin’ny sokajy lehilahy, eo amin’ny vondrona “A” misy azy ny GNBC Vakinankaratra, manana isa 13, raha ny Ascut Atsinanana kosa no voalohany eo amin’ny vondrona “B”, manana isa 11.
Ny SBBC Boeny indray no mitarika amin’ny filaharana vonjimaika eo amin’ny sokajy vehivavy, eo amin’ny vondrona “A” raha ny MB2All Analamanga ny eo amin’ny vondrona “B”. Any amin’ny laharana faharoa manaraka ity ekipan’Analamanga ity eo amin’io vondrona io kosa ny Ascut.
Noho izany, hiady tanteraka ny fihaonan’ireo ekipa mpandray anjara amin’ity fihodinana faharoa ity. Raha ny fanazavana mantsy, ny isa azon’ireo mpilalao tsirairay tamin’ny fihodinana voalohany no miampy arakaraka ny vokatra azony eo amin’ity fihodinana faharoa ity. Manomboka anio mantsy ny dingana farany amin’ny fifaninanam-pirenena ho amin’ity taom-pilalaovana 2018 ity. Araka izany, samy hanao izay ho afany ireo ekipa mpandray anjara.
Ho an’ny Ascut Atsinanana manokana, sokajy lehilahy, ny handrombaka ny tompondakan’i Madagasikara no tanjon’izy ireo. Raha ny fanazavan’ny mpanazatra, Herilanto Randriamanalina na Baomba, efa ao anatin’ny tanjany tanteraka ireo mpilalaon’ny Ascut amin’izao fotoana izao, ary vonona ny haka amboara. Na izany aza, hoy izy, tsy misy azo tsinontsinoavina ireo mpifanandrina rehetra, eny fa na efa mifankahalala fomba filalao aza… Nohamafisiny fa tsy ho moara ny ady amin’ny fitrandrahana anaram-boninahitra.